अभियन्ता नेल्सन मन्डेलाका जीवनका महत्वपूर्ण घटनाक्रम « News of Nepal
अभियन्ता नेल्सन मन्डेलाका जीवनका महत्वपूर्ण घटनाक्रम
अफ्रिकामा रंगभेद विरुद्ध अथक आन्दोलन गरेका तथा पछि दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति समेत बन्न सफल शान्तिका लागि नोवेल पुरुस्कार विजयी नेल्सन मन्डेलाको जिवनका प्रमुख घटना क्रम यस प्रकार रहेका छन् ।
१९१८ जुलाइ १८ – रोलिह्लाह्ला दालीभुंगा मन्डेलाको जन्म माविदा आदीवासी समुहमा भएको थियो । उनका पिता गाद्ला हेनरी फाकानिस्वा र आमा नोजकेनी फ्यान्नी हुन् । मन्डेलाको आदीवासी नाम रोलिह्लाह्लाको अर्थ समस्या निम्ताउने हो । पछि एकजना शिक्षकले उनको अंग्रेजी नाम नेल्सन राखेका थिए ।
१९१९ – मन्डेलाका पिताले आफ्नो भुमि र पैसा गुमाए । त्यसका लागि गोरा न्याधिशले आदेश दिएका थिए ।
१९२७ – मन्डेलाका पिताको निधन । थेम्वु आदीवासी समुहका नाइके जोन्गिन्तावा दालिनदाइवो उनका अभिभावक बने । दालिनदाइवोले उनको शिक्षामा निकै जोड दिए ।
१९३७ – मन्डेला हिल्डटाउन तर्फ प्रस्थान गरे । उनले इस्टर्न केपको फोर्ट बिउफोर्ट स्थित वेस्लेयान कलेजमा पढ्न थाले । इस्टर्न केपको एलिस स्थित फोर्ट हेयर विश्वविद्यालयमा उनले बि .ए. पढ्न थाले । उनले त्यहाँ आजिवन मित्र ओलिभर टाम्वो भेटे ।
१९३९ – विदार्थी प्रतिनिधि परिषदले विश्वविद्यालयको नीतिहरको बहिष्कार गरेको कायक्रममा भाग लिए वापत उनले फोर्ट हृयर छाड्नु प¥यो । परम्परागत विवाहबाट बच्न उनी जोहान्नेसवर्ग तर्फ लागे ।
उनले त्यहाँ रंगभेदी व्यवहार देखे । काला जातिका जनतालाई भू –स्वामित्व , यात्रा वा मतदान अधिकारबाट वन्चित गरिएको थियो । उनले पत्राचार पाठ्क्रम अनुसार साउथ अफ्रिका विश्वविद्यालयबाट बि. ए .गरे ।
१९४३– मन्डेला अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस ( एएनसि ) मा प्रवेश गरे ।
१९४४ – ओलिभर टाम्वो र वाल्टर सिस्लुको सहयोगमा उनले एएनसिको भातृसंगठनको रुपमा युथ लिग गठन गरे । उनले प्रथम पत्नीको रुपमा इभिलिन टोको मासेसंग विवाह गरे । यो विवाह १९५७ सम्म सफल रह्यो । तिनीहरुका तीन सन्तान जन्मिए ।
१९४८ – दक्षिण अफ्रिकी सरकार नेसनल पार्टीले नेतृत्व गर्दा देशभरि रंगभेद फैलियो । काला अफ्रिकीहरुको स्वतन्त्रता धेरै खुम्च्याइयो ।
१९५२ – एएनसिको अवज्ञा आन्दोलनमा उनले अह्म भुमिका निभाए । उनी र ओलिभर टाम्वोले दक्षिण अफ्रिकाकै पहिलो काला जातिको कानुन फर्म खोले । यसले कलाहरुलाई निहुल्क वा न्युन शुल्कमा कानुनी सेवा दिन्थ्यो ।
१९५५ – कंग्रेस अफ पिपुलले स्वतन्त्रता विधान अवलम्वन गर्दै समान अधिकार लागु गर्न माग ग¥यो ।
१९५६ डिसेम्वर ५ –अन्य १ सय ५५ जना कार्यकता सहित मन्डेलालाई राष्ट्रघातीको संगीन अभियोग लगाइयो । उनलाई सरकार पल्टाउन खोजेको आरोप लाग्यो । यो मुद्धा १९५६ देखि १९६१ सम्म चल्यो । अन्तत सबैले सफाइ पाए ।
१९५७ – उनी १३ वर्ष लामो वैवाहिक जिवनपछि पत्नी मासेबाट छुटिए ।
१९५८ – उनले नोमजामो ‘विन्नी ’ मादिकिजेलासंग विवाह गरे । तिनीहरुबाट दुई सन्तान जन्मिए । तिनीहरु १९९२ मा छुटिए । १९९६ मा तिनीहरुको पारपाचुके भयो ।
१९५९ – संसदबाट अझै रंगभेद बढाउने कानुन पारित भयो । एएनसिले सैनिक र आर्थिक समर्थन गुमाउन थाल्यो । यका सदस्यहरु रोवर्ट सोवुक्वि र पोत्लाको लेवाल्लोसंग मिलेर पान अफ्रिकनिस्ट कंग्रेस गठन गर्न तर्फ लागे ।
१९६० – प्रहरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका ६९ जनाको हत्या ग¥यो। यो घटना सार्पभिलले हत्याकाण्डको नामले चिनिन्छ । त्यसपछि एएनसि प्रतिवन्धित भयो । मन्डेला भुमिगत भए । त्यहिवेला उनले भूमिगत सैनिक समुह गठन गरे ।
१९६१ – अल – इन अफ्रिकन कन्फरेन्समा मन्डेलालाई उमखोन्तोत गुरिल्ला मुभमेन्टको नेता घोषित गरियो ।
१९६२ ,अगष्ट ५ – सत्र महिना लामो भूमिगत पछि उनी पक्राउमा परे । उनलाई जोहान्नेसवर्ग किल्लामा लगियो । उनलाई पाँचवर्ष कैद तोकियो । तर उनी फरार भए ।
१९६४ , जुन १२ – उलाई फेरी पक्राउ गरी राष्ट्रघात र बिद्रोहको अभियोग लगाइयो । ४६ वर्षको उमेरमा उनलाई आजिवन कारावास सुनाइयो । उनलाई रोब्बेन टापुमा थुनियो ।
१९६५ – रोडेसियाले स्वाधिनता हासिल गर्‍यो। नयाँ सरकारमा गोरा समुहहरु मात्र सम्मिलित भए ।
१९६८ – मन्डेलाकी माता फ्यान्नीको निधन । उनका जेठा छोराको पनि कार दुर्घटनामा मृत्यु । तर दुवै अन्त्येष्टिमा उनलाई भाग लिन दिइएन ।
१९७४– रंगभेद नीतिको कारण संयुक्त राष्ट्र संघले रोडेसियालाई निष्कासित गर्‍यो ।
१९७६ – सार्पभिल्ले र सोवेटोमा भएको प्दर्शनमा ६ सय जना भन्दा बढि बिद्यार्थी मारिए ।
१९८० – जिम्वावेले स्वाधिनता प्राप्त गर्‍यो । ओलभरले मन्डेलाको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान शुरु गर्‍यो ।
१९८६ – दक्षिण अफ्रिकाको नाकावन्दिले देशले लाखौं डलरको मूल्य चुकउनु पर्‍यो ।
एमनेष्टिले सम्पूर्ण सरकार विरोधिलाई क्षमा दियो ।
१९९० फ्रेवुअरी ११ – सत्ताइस वर्षपछि नेल्सन मन्डेला कारागार मुक्त भए । एएनसि माथिको बन्देज हट्यो । दक्षिण अफ्रिकाका लागि बहुजातिय प्रजातन्त्र स्थापना गर्न एएनसिले गोरो नेसनल पार्टीसंग वार्ता थाल्यो ।
१९९१ – मन्डेला अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस ( एएनसि ) का अध्यक्ष घोषित । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितीले२१ व्र्ष लामो प्रतिवन्ध हटाएपछि दक्षिण अफ्रिकाका खलाडीलाई ओलम्पिकमा भाग लिने अनुमति ।
१९९२ अप्रिल – मन्डेला अपारधमा मुछिएकी पत्न िविन्नीबाट छुटिए । चारवर्ष पछि तिनीहरुको पारपाचुके भयो ।
१९९३ – राष्ट्रपति डि क्लार्कसंगै सुयुक्त रुपमा मन्डेलालाई नोवेल शानित पुरुस्कार प्रदान गरियो ।
१९९४ , अप्रिल २६ – पहिलो पटक काला दक्षिण अफ्रिकीलाई मतदान अधिकार प्राप्त । मन्डेला राष्ट्रपतिय उम्मेदवार बने । राष्ट्रिय सभामा एएनसिले ४ सय मध्ये २ सय ५२ सिट जित्यो । मेमा मन्डेला दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो काला राष्ट्रपति बने । डि क्लेर्क उप-राष्ट्रपति बनाइए ।
१९९८ – आफ्नो असियौं जन्मदिनको पलक्षमा उनले ग्रसा माचेलसंग विवाह गरे । माचेल मोजाम्विकका पुर्व राष्ट्रपति सामोरा माचेलकी विधवा हुन् ।
१९९९ – सन् १९९७ मा एएनसिका अध्यक्ष उम्मेदवार थावो बेकीलाई राष्ट्रपति बनाएर उनले विश्व यात्रा शुरु गरे ।
२००१ – उनले बुरुन्डीको गृहयुद्धको अन्त्यका लागि मध्यस्थकर्ताका भुमिका निभाए । उनको प्रोस्टेट क्यानस पहिचान भएपछि उपचार हुरु गरियो । क्यानाडाले उनलाई मानार्थ नागरिकता प्रदान ग¥यो ।
२००३ – उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशको विदेश नीतिको सार्वजनिक रुपमा विरोध गरे ।
२००४ जुन – उनले ८५ वर्षको उमेरमा सार्वजनिक जिवनबाट अवकास लएको घोषणा गरे । उनी जोहान्नेसवर्गको सबैभन्दा उच्च उपाधि ‘ नगर स्वतन्त्रता ’ बाट सम्मानित भए ।
२००६ जनवरी ६ – मन्डेलाका पुत्र मकगाथोको एडसबाट मृत्यु ।
२०१३ जुन – पछिल्ला केहि वर्षदेखि अस्पतालमा पटक पटक उपचार हुँदै गरेका उनलाई फोक्सोको संक्रमणको कारण पुन अस्पताल भर्ना गरियो । ५ डिसेम्वरमा उनको ९५ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
कोविड १९ बिरूद्धको लागि बेलायतमा बनेकाे
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड